#Madagascar : Tsimiroro – Hajoro ireo sinibe mahazaka solika 180 000 barila | ONG Lalana Blog
#Madagascar : Tsimiroro – Hajoro ireo sinibe mahazaka solika 180 000 barila
Be fanantenana. Famatsiam-bola mitentina manodidina ny 35 tapitrisa dolara indray no hatonton’ny Madagascar Oil, amin’ny fanatanterahana ny tetikasa andrana fitrandrahana solika mavesatra ao Tsimiroro. Isan’ny asa goavana hatao ao anatin’ny 18 volana hanaovana andrana izany ny fanorenana ireo sinibe telo, mahazaka solika 60 000 barila avy.
Ny iray ireo amin’ny sinibe ireo no efa hajoro amin’izao fotoana izao. Raha ny vinavinan’ny Madagascar Oil mantsy dia solika 1 000 barila isan’andro no heverina hiakatra mandritra izany tetikasa andrana na “projet pilote” izany. Tombanana hanana tahirin-tsolika mavesatra 1 700 tapitrisa barila ny ao ambanin’ny tanin’i Tsimiroro.
Raha fintinina dia solika mavesatra mitambolona no hoezahin’ireo teknisian’ny Madagascar Oil hatsonika, amin’ny alalan’ny entona mahery vaika avy amin’ny rano ary ampiakarina aty ambonin’ny tany. 150 ka hatramin’ny 300 metatra ny halalin’ny toerana ahitana io karazan-tsolika io. Mbola hatoby amin’ireo sinibe telo ireo kosa ny solika mavesatra 180 000 barila kendrena ho voatrandraka hatramin’ny taona 2014.
Aorian’ity tetikasa andrana ity vao handrefy ny fahafahafana na tsia tena mitrandraka sy mivarotra solika avy ao Tsimororo ny Madagascar Oil.